Dowladda Jabuuti oo xiriirka u jartay Iran
07 January, 2016(GO)-Bayaan kasoo baxay dowladda Jabuuti ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed loogu jaray xukuumadda Tehraan, waxaana arrinta daba joogtaa weerar dad carraysan dhawaan ku qaadeen safaaradda Sacuudigu ku leeyahay xarunta dalka Iran.
Arrinta ayaa dadka siyaasadda odorosa ku sheegeen xiriirka qotoda dheer ee ka dhaxeeya Jabuuti iyo Sacuudiga inay ka dambayso tallaabadaasi.
Horray waxaa dalka Iran xiriirka diblomaasiyadeed u jaray waddamada carbeed qaybtooda sida; dalalka Saudi Arabia, Bahrain iyo Sudan, halka Imaaraadka Carabtana ay hoos u dhigeen xiriirka.
Dhammaan afartan dal ayaa xubno ka ah ururka Jaamacadda Carabta, oo axadda qaban doono kulan gaar ah oo arrintan ku saabsan.
Xumaanshaha xiriirka waddamadan ayaa yimi kadib markii Boqortooyada Riyad dil u gaysteen 47 ruux oo lagu soo eedeeyay falal argagixiso, waxaana kamid ahaa wadaad dadka Shiicadda aad u qadariyaan kaasoo lagu magacaabi jiray Nimr Baqir al-Nimr.